Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: ၁၅-၃-၀၉။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးကော်မတီသို့ အစီရင်ခံစာ
၁၅-၃-၀၉။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးကော်မတီသို့ အစီရင်ခံစာ
Yamuna Clinic Mobile Health Team Report to NHEC
နယ်လှည့်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (MHT) အစီရင်ခံစာ
၁။ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖေါ်သောဒေသ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီ၊ အနောက်ပိုင်း။
(၁) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဧရိယာ၊ ဗီကပ်စ်ပူရီ၊ ဂျနက်ပူရီ၊ အဆလာပူ၊ အူတမ်နဂါး၊ ဘင်ဒါပူ၊ စီတာပူ၊ ဂျီဗမ်းပတ်ခ်၊ ဟတ်ဆာလ်။
(၂) မြို့နယ်၊ နယူးဒေလီ။
(၃) ခရိုင်/ဒေသ၊ ဒေလီ။
တာဝန်ခံအမည်၊ ဒေါ်မြေမြအေး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအမျိုးအစား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊
1. Dr. Tint Swe, MBBS, doctor
2. Daw Thida Myint, Trained Nurse
3. Mr. Ro Kung, Community Health Worker
4. Ma Aye Thazin, First Aid Worker
5. Ms Cheery Phun Mawi, Under training
6. Ms Cing Kop Lun, Under training
(က) ကျေးရွာအရေအတွက် (၉)
နောက်ဆက်တွဲ (၂-က)ဇယားတွင် အပြည့်အစုံဖြည့်ရန်။
(ခ) အများစုနေထိုင်သည့်လူမျိုး၊ ချင်း၊ ကူကီး၊ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ နာဂ၊ ကပြား။
(ဂ) အများစုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည့်အလုပ်အကိုင်၊ နေ့စား။ အလုပ်လက်မဲ့။
(ဃ) ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လမ်းခရီးအခြေအနေ(ယေဘုယျသုံးသပ်ချက်)၊ စက်ဘီး၊ ဆိုက်ကား၊ သုံးဘီးကား၊ တက်စီ၊ မက်ထရို၊ စသည်သုံး၍သွားလာရသည်။ နေရာတခုမှတခုသို့ဝေးကွာသည်မှလွဲ၍ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းသည်။
(င) ပညာရေးအခြေအနေ၊ ကလေးငယ်များ အများစုသည် ကျောင်းနေနိုင်ကြပြီး၊ ၅ ပုံတပုံမှာ ကျောင်းမနေနိုင်ကြ။ အထက်တန်း ကျောင်းသား အရေအတွက် ၁ဝဝ အောက်။ တက္ကသိုလ်-ကော်လိပ် ကျောင်းသား ၁ဝဝ ခန့်၊ ခရစ်ယန် ဘာသာရေးကျောင်းသား၊ ၁ဝဝ ကျော်။
၁။ ကျောင်းအရေအတွက်၊ အိန္ဒိယကျောင်း မြောက်မြားစွာရှိသည်။ အချိန်ပိုင်းသင် မြန်မာကျောင်း ၅ အောက်ရှိသည်။
၂။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအရေအတွက်၊ ၃ဝဝ ပါတ်ဝန်းကျင်။
၃။ ဆရာ၊ဆရာမအရေအတွက်၊ အိန္ဒိယလူမျိုးဆရာ-ဆရာမ မြောက်မြားစွာရှိသည်။ လုပ်အားပေး၊ အချိန်ပိုင်း မြန်မာဆရာ-ဆရာမ ၂ဝ အောက်ရှိမည်။
သေဆုံးမှုများစေသောရောဂါများ/ အကြောင်းအရာများ (အဖြစ်များမှုအစဉ်အတိုင်း)
ကျန်းမာရေးအကောင်အထည်ဖော်ရာဒေသနှင့်အနီးဆုံးဆေးခန်း(သို့)ဆေးရုံအကွာအဝေးနှင့်အချိန်၊ အချို့လူနာများသည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဆေးခန်းသို့ရောက်နိုင်ပြီး၊ အချို့လူနာများသည် ၃ဝ မိနစ်မှ ၄၅ မိနစ်ကြာ ဆိုက်ကား သို့မဟုတ် သုံးဘီးစီး၍ ဆေးခန်းသို့လာရသည်။
၁။ တနှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်မှုအရေအတွက်၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်။ တိုက်ပွဲမရှိ။ တခါတရံ အကြမ်းဖက်သမားများ ရှိတတ်သည်။
၂။ တနှစ်အတွင်းရွာပြောင်းရွှေ့ရသည့်အရေအတွက်၊ ဒုက္ခသည်အဟောင်းများ တတိယနိုင်ငံသို့ထွက်ခွါနေသည်။ ဒုက္ခသည်အသစ်များ ဆက်လက်၍ မြန်မာပြည်ထဲမှ ထွက်လာနေသည်။
(ဇ) အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ ပြည်စုံလုံလောက်မှုအခြေအနေ၊ ဒုက္ခသည်အများစုမှာ အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ လုံလောက်မှုမရှိ။
ဝယ်စားရန် ဝင်ငွေနည်း၊ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေလုံးဝမရှိ။ ငွေရှိလျင် ဘာမဆိုဝယ်၍ရနိုင်သည်။
အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ လုံလောက်မှု ရှိ၊ မရှိ၊ ဒုက္ခသည်အများစုမှာ အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ လုံလောက်မှုမရှိ။
လုံလောက်မှုမရှိသည့် အချိန်ကာလ ( ) ၃လအောက်၊ ( ) ၃လ-၆လ၊ ( √ ) ၆လနှင့် အထက်။
မလုံလောက်သည့်အကြောင်းရင်း၊ ဝင်ငွေနည်း၊ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေလုံးဝမရှိ။
ပြုလုပ်ချက်။ ။ စာသင်ကျောင်းများ(သို့)ကျေးရွာလူထုတွင် သံချပေးခြင်းနှင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအစီအစဉ်။
သံချပေးခြင်းနှင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအစီအစဉ်အား NHEC/WR မှဆောင်ရွက်သည်အား ယမုန်နာဆေးခန်း တာဝန်ရှိသူများက ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးချက်။ ။ သံကောင်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးခြင်း။
သံကောင်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးအတွက် NHEC/WR မှဆောင်ရွက်သည်အား ယမုန်နာဆေးခန်း တာဝန်ရှိသူများက ပူးပေါင်း လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လူနာအရေအတွက် အသက်၅နှစ်အောက် အသက်၅နှစ်အထက် စုစုပေါင်း
၂ဝဝ၇-ဝ၈ တနှစ်အတွင်း ၃၄၉ ၆၆၄၃ ၆၉၉၂
၆။ ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းနှင့်ပါတ်သက်သော အကောင်အထည်ဖော်မှုများ။
(က) သင်တန်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော နေရာဒေသများ
(ခ ) အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော သင်တန်းအရေအတွက်
(ဂ ) သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းသူသင်တန်းသားစာရင်းကို ကျား၊မ အရေအတွက်နှင့်ဖော်ပြရန်။
(က) လူထု(ကျေးရွာအာဏာပိုင်၊ လူငယ်၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ရွာသားများ)မှ သင့်အလုပ်တွင် မည့်ကဲ့သို့ ကူညီမှုပြုပုံ
နောက်ဆက်တွဲ (၅-က)တွင် အပြည့်အစုံဖော်ပြရန်။
(ခ) လူထု(ကျေးရွာအာဏာပိုင်၊ လူငယ်၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ရွာသားများ)မှ ဤစီမံချက် လုပ်ငန်းအပေါ် သုံးသပ်အကြံပြုချက်
နောက်ဆက်တွဲ (၅-ခ)တွင် အပြည့်အစုံဖော်ပြရန်။
၈။ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများ၊ မှတ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်များ
ဥပမာ - ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ
- ကျန်းမာရေးလုပ်သားအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့များ
(နောက်ဆက်တွဲ(၆-က)၊ (၆- ခ)တွင်အပြည့်အစုံဖော်ပြရန်။)
- ကျန်းမာရေးလုပ်သားများခရီးသွားလာသည့်ပုံ ၊ ကျန်းမာရေးကာကွယ်ကုသမှုလုပ်ဆောင်ချက်များပုံ၊ ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းများပုံ
ကျေးရွာအမည် အိမ်ခြေ ၅ နှစ်အောက် ၅ နှစ်အထက်
ကျား မ ပေါင်း ၅-၁၄ နှစ် ၁၄-၄၅ နှစ် ၄၅ အထက် စုစုပေါင်း
ကျား မ ကျား မ ကျား မ ကျား မ
ဗီကပ်စ်ပူရီ နှင့် ဂျနက်ပူရီ။ ၇ဝဝ မြန်မာ သီးသန့် ၁၇၅ ၂ဝဝ ၃၇၅ ၁၇၅ ၁၇၅ ၈၂၅ ၈၅ဝ ၅ဝ ၅ဝ ၁၁၂၅ ၁၁၇၅ ၂၃ဝဝ
စုစုပေါင်း ၁၇၅ ၂ဝဝ ၃၇၅ ၁၇၅ ၁၇၅ ၈၂၅ ၈၅ဝ ၅ဝ ၅ဝ ၁၁၂၅ ၁၁၇၅ ၂၃ဝဝ
မိမိအကောင်အထည်ဖေါ်ရာ ဧရိယာအတွင်းရှိ ကျောင်းများစာရင်း
ကျောင်းအမည် ဆရာ၊ မ ဦးရေ ကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း
မူလတန်း အလယ်တန်း အထက်တန်း
Prospect Burma ၄ ၇ဝ ၇ဝ
Don Bosco school ၃
စုစုပေါင်း ၉ ၇ဝ + ၇ဝ +
စီမံချက်။ ။ သံကောင်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးအစီအစဉ်
ရက်စွဲ စာသင်ကျောင်း၊ ကျေးရွာ အမည် လုပ်ဆောင်မှု ကျောင်းသား၊ လူဦးရေ အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများ မှတ်ချက်
ရောဂါ မေ ဇွန် ဇူလိုင် သြဂုတ် စက်တင်ဘာ အောက်တိုဘာ
<၅နှစ် >၅ နှစ် <၅နှစ် >၅ နှစ် <၅နှစ် >၅ နှစ် <၅နှစ် >၅ နှစ် <၅နှစ် >၅ နှစ် <၅နှစ် >၅ နှစ်
ငှက်ဖျား ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ၁ ဝ ၂ ဝ ၂ ဝ ၃
အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (အထက်) ၁၂ ၉ ၁၅ ၁၂ ၂ဝ ၁၄ ၂၂ ၁၆ ၂၆ ၁ဝ ၂၈ ၁၈
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (အောက်) သာမန် ၁ဝ ၈ ၁၂ ၁ဝ ၁၄ ၈ ၁၈ ၁၁ ၂၂ ၁၅ ၂၅ ၁၆
ဆိုးဝါး ၂ ၁ ၄ - ၁ ၂ ၁ ၅ ၂ ၆ ၄ ၄
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော ၂ဝ ၁၉ ၂၂ ၁၂ ၂၄ ၁ဝ ၂၆ ၁၅ ၂၅ ၁၈ ၂၈ ၁၅
ဝမ်းကိုက် ၂ ၁ ၄ ၂ ၅ ၃ ၄ ၂ ၅ ၃ ၆ ၃
သံကောင်ရောဂါ ၄ - ၅ ၁ ၇ ၃ ၆ ၃ ၇ ၄ ၅ ၁
အာဟာရချို့တဲ့မှု ၂ဝ ၅ ၂၂ ၇ ၂၅ ၁၈ ၂၂ ၁ဝ ၂၆ ၁၉ ၂၈ ၂ဝ
အရေပြားဆိုင်ရာ ရောဂါ ၁ဝ ၁၄ ၁၂ ၁၅ ၁၉ ၂၂ ၁၃ ၂၄ ၁၉ ၂ဝ ၁၈ ၂၄
ဝက်သက် ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
ဦးနှောက်မြှေးရောင် ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
တီဘီ (သံသယ) ဝ ၂ - ၂ - ၃ - ၂ - ၄ - ၂
AIDS (သံသယ) ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ၅
သွေးအားနည်း - ၁ဝ - ၁၆ - ၂ဝ ၂ ၂၂ ၂ ၂၂ ၂ ၂၂
အခြား ၂၁၇ ၂၁ဝ ၂၂၈ ၂ဝ၉ ၂၄၂ ၂၃၇ ၂၁၁ ၂၅၁ ၂၂၄ ၂၃၉ ၂၄၈ ၂၃၅
သေနတ်ဒဏ်ရာ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
မိုင်း ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
အခြား ၄ ၈ ၅ ၉ ၃ ၁ဝ ၄ ၈ ၃ ၆ ၄ ၁၁
စုစုပေါင်း ၄၃၈ ၄၂၈ ၄၆၁ ၄၉၃ ၇ ၈၄ ၄၂၆ ၅၁ဝ ၄၅၁ ၄၈၄ ၅ဝဝ ၄၈၆
ရောဂါ နိုဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာ ဇန်နဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီ မတ် ဧပြီ
ငှက်ဖျား ဝ ၂ ဝ ၅ ဝ ၆ ဝ ၆ ဝ ၅ ဝ ၃
အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (အထက်) ၂၅ ၁၂ ၂၂ ၈ ၃၂ ၁၆ ၃၄ ၂၆ ၂၆ ၁ဝ ၂၆ ၁၅
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (အောက်) သာမန် ၂ဝ ၁၄ ၂၂ ၃ဝ ၂၄ ၁၈ ၂၈ ၂၁ ၂၈ ၂၅ ၂၃ ၁၄
ဆိုးဝါး ၂ ၃ ၆ ၃ ၅ ၄ ၄ ၈ ၃ ၅ ၅ ၈
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော ၂၂ ၂၉ ၂၆ ၁၉ ၂၃ ၁၆ ၂၉ ၁၈ ၂၄ ၁၈ ၃ဝ ၂၅
ဝမ်းကိုက် ၃ ၄ ၅ ၆ ၆ ၁ဝ ၈ ၁၂ ၁၅ ၁၃ ၁၆ ၁၃
အာဟာရချို့တဲ့မှု ၂၁ ၇ ၂၄ ၉ ၂၃ ၁၈ ၂၄ ၁၇ ၂၉ ၁၉ ၃၁ ၂၄
အရေပြားဆိုင်ရာ ရောဂါ ၁၂ ၁၅ ၁၄ ၁၆ ၂၂ ၂၄ ၁၄ ၂၂ ၁၈ ၂ဝ ၁၈ ၂၆
တီဘီ (သံသယ) ဝ ၂ ဝ ၁ ဝ ၃ ဝ ၃ ဝ ၂ ဝ ၃
AIDS (သံသယ) ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
သွေးအားနည်း ၂ ၂ဝ ၃ ၂၂ ၄ ၂၄ ၃ ၂၅ ၃ ၂၆ ၃ ၂၈
အခြား ၂၂၇ ၂၂ဝ ၂၄၈ ၂၃၉ ၂၇၂ ၂၇၇ ၂၇၁ ၃ဝ၁ ၂၇၄ ၂၈၉ ၂၇၈ ၃၁၅
စုစုပေါင်း ၄၅၈ ၄၄၈ ၅ဝ၁ ၄၈၇ ၅၄၇ ၅၆၄ ၅၄၆ ၆၁ဝ ၅၅၁ ၅၈၄ ၅၆ဝ ၆၄ဝ
နောက်ဆက်တွဲ (၄-ခ) ရောက်ရှိသည့်အချိန်၌ရှိသည့်လူဦးရေ
နေ့စွဲ လူဦးရေ စုစုပေါင်း
နောက်ဆက်တွဲ (၄-ဂ) ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းနှင့်ပါတ်သက်သော အကောင်အထည်ဖော်မှုများ
ဒေလီ၊ ဗီကပ်စ်ပူရီ၊ သင်တန်း
အရေအတွက် တက်ရောက်သူ (ကျား) တက်ရောက်သူ (မ) စုစုပေါင်း တက်ရောက်သူ
၁ (၁-၁ဝဝ၇) ၂၅-၇-ဝ၇ မှ ၃ဝ-၇-ဝ၇ ၁ ဝ ၁ဝ ၁ဝ
၂ (၂-၁ဝဝ၇) ၂ဝ-၈-ဝ၇ မှ ၂၇-၈-ဝ၇ ၁ ၃ ၈ ၁၁
၃ (၃-၁ဝဝ၇) ၁၉-၁၂-ဝ၇ မှ ၂၄-၁၂-ဝ၇ ၁ ၅ ၆ ၁၁
နောက်ဆက်တွဲ (၅-က) လူထု(ကျေးရွာအာဏာပိုင်၊ လူငယ်၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ရွာသားများ)မှ သင့်အလုပ်တွင် မည့်ကဲ့သို့ကူညီမှုပြုပုံ
ဒေလီရှိ မြန်မာဒုက္ခသည် လုံးလုံးလျားလျား အများစုသည် ချင်ပြည်နယ်မှဖြစ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့် ပင်ဂိုကပင် ဆင်းရဲကြပြီး၊ အလုပ်အကိုင်မရရှိခြင်း၊ ရသည့်အလုပ်မှလည်း ဝင်ငွေနည်းခြင်း၊ မိသားစုများလည်း ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် အပြင်ဆေးခန်းမဆိုထားနှင့် အစိုးရဆေးရုံများသို့သွားရန်ပင် လွန်စွာခက်ခဲကြပေသည်။ ထို့ကြောင့် ယမုန်နာဆေးခန်းကို များစွာ အားကိုး အားထားပြုကြရသည်။
စေတနာနှင့် ပညာအခြေခံရှိပြီး၊ အချိန်ပေးနိုင်သူများက ဆေးခန်းသို့ အခမဲ့ လာရောက်ကူညီကြသည်။ ဒုက္ခသည် ကော်မတီ အသီးသီးကလည်း (ယူအင်အိတ်ခ်ျစီအာ)နှင့် အခြား(အင်ဂျီအို)များ ထံလည်း ကူညီတင်ပြပေးကြသည်။ ဆေးခန်း၏ လုပ်ငန်းများကို လည်း နာလည်မှုပေးကြသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၅-ခ) လူထု(ကျေးရွာအာဏာပိုင်၊ လူငယ်၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ရွာသားများ)မှ ဤစီမံချက် လုပ်ငန်းအပေါ် သုံးသပ်အကြံပြုချက်
နောက်ဆက်တွဲ (၆-က) လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများ
ဒေလီတွင်နေထိုင်ကြရသော မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးသည် မိမိစားဝတ်နေရေးအတွက် နေ့စဉ် ရုံးကန်နေကြရသူများဖြစ်ရာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး အစရှိသည့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်နည်းပါးကြသည်။ မိမိတို့၏ အဆိုပါ လူမှုရေးကိစ္စ ရပ်တိုင်းအတွက် ရံပုံငွေဆိုသည်မှာလည်း ရှားပါးကြသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကုန်ကျနိုင်ရန်ပင် မတတ်နိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမျိုးကိုဖြစ်စေ အားကိုးအားထားပြုကြရပေသည်။ သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသည့်နေရာဌာနသို့ပင်သွားရောက်ရန် လမ်းစရိတ်ပင်ခက်ခဲသူ အများအပြား ရှိနေသည်။ ကိုယ်တိုင် ဆေးဝယ်ရန်၊ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရန်၊ ဆေးရုံတက်ရန်၊ စသည့်ကုန်ကျစရိတ် ဆိုသည်ကို မတတ်နိုင်ကြချေ။
ထို့ပြင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံရှိနေခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့် ဘာသာစကား အခက်အခဲရှိသည်။
အမျိုးသားပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကော်မတီမှ အခမဲ့ဆေးဝါးထောက်ပံ့ခြင်းသည်များစွာ အထောက်အကူ ရပေသည်။ သို့ရာတွင် တစတစများလာသည့် လူနာဦးရေ၊ ပြုစုစောင်ရှောက်ပေးရသည့် ကျန်းမာရေးနယ်ပယ် များလာသည်ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် နှစ်ဝက် နောက်ပိုင်းတွင် ဆေးဝါးမလောက်ငခြင်းဖြစ်ရသည်။
ယမုန်နာဆေးခန်းသည် အခြား (အင်ဂျီအို)အထောက်အပံ့မယ်မယ်ရရ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေးခန်းအကူ ဆရာ-ဆရာမများအား လမ်းစရိတ်ပင်လျင် မထောက်ပံ့နိုင်သဖြင့် စေတနာသက်သက်ဖြင့် လာရောက် ကူညီနိုင်သူများအား အထူး ကျေးဇူးတင်သင့်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့အတွက် အနည်းဆုံး လမ်းစရိတ်နှင့် ဝတ်စုံစရိတ်လိုအပ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီးသူများအနေနှင့် အလွဲမသွေ တတိယနိုင်ငံများသို့ အခြေချ နေထိုင်ရန် ရှိနေခြင်းကြောင့် သင်တန်းများပေး၍ လူသစ်များထပ်မံ-ဆက်လက်မွေးထုတ်နေရပါသည်။ လူထုအကျိုးပြုနိုင်ခြင်းအပြင် တတ်မြောက် လုပ်အားပေးထားသူများအဖို့ ရောက်ရာနိုင်ငံ၊ နေရာ၊ ဌာနများတွင် ဆက်လက် အသက်မွေးရန်ကိုပါ အထောက်အကူပြုပေသည်။ အဆိုပါသင်တန်းမျိုးသည် လွန်စွာ အကျိုး ဖြစ်စေသော်လည်း သင်တန်းအတွက် ထောက်ပံမည့် (အင်ဂျီအို) ယနေ့အထိ မရှိသေးချေ။
ဆေးခန်းအတွက် အခန်းနေရာငှားခ မလုံလောက်သဖြင့် တခန်းစာသာ ငှားနိုင်သည်ဖြစ်ရာ မွေးလူနာ၊ ခွဲစိတ်လူနာ၊ တခါတရံ အတွင်းလူနာကဲ့သို့ ဆေးခန်းတွင်ထား၍ ကုသပေးရန်အတွက် နေရာမရှိပါ။
ဆေးခန်းအား အစိုးရမြူနီစပယ်ရုံး၌ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည့်နေရာ အခင်းအကျင်း လိုအပ်သောကြောင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ခက်နေပါသည်။ အကယ်၍ မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက ဆေးခန်းတွင် မွေးဖွါးသည့် ကလေးများအား မွေးစာရင်း ပြုလုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။
ဆေးခန်းသို့လာရောက်ကုသသည့်လူနာအများစုမှာ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများဖြစ်ပါသည်။ မွေးလူနာဦးရေ လွန်စွာ များလာသည်။ သို့ရာတွင် မွေးပြီးပြီးချင်းထိုးပေးရမည့် ကာကွယ်ဆေးအတွက် ရုံပုံငွေမရှိပါ။ မိခင်လောင်းများအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးကို ၅ ရက် တပါတ်စာထက်ပိုမပေးနိုင်ပါ။
နောက်ဆက်တွဲ (၆-ခ) ကျန်းမာရေးလုပ်သား၏ မှတ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်
Posted by Dr. Tint Swe at 5:01 AM